Bit By Bit - Mifehy - 6.4.3 Justice
Justice dia ny hahazoana antoka fa ny loza sy ny soa ny fikarohana no voazara.
Ny tatitra Belmont dia milaza fa ny foto-kevitry ny Justice dia manondro ny fizarana ny enta-mavesatra sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fikarohana. Izany hoe, tsy tokony ho toy ny hoe ny vondrona iray ao amin'ny fiarahamonina dia mandany ny fandaniana amin'ny fikarohana raha misy vondrona hafa mandray ny tombony azony. Ohatra, tamin'ny taompolo fahasivy ambinifolo sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20, dia nihoatra ny mahantra ny enta-mavesatry ny fikarohana momba ny fitsaboana ara-pitsaboana, ary ny soa ho an'ny fitsaboana amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia nirotsaka ho an'ny mpanankarena.
Amin'ny fampiharana, ny fitsipiky ny Fitsarana dia nodinihina tamin'ny voalohany dia ny hoe tokony ho voaro amin'ny mpikaroka ny olona vulnerable. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpikaroka dia tsy tokony omena alalana hanao tsinontsinona ny tsy fahampiana. Mampihetsi-po ity trangan-javatra ity izay nahatonga ireo mpandray anjara marefo, tao anatin'izany ny fanadihadiana maro samihafa, anisan'izany ireo olona tsy dia nahita fianarana sy tsy nahazo alalana (Jones 1993) ; voafonja (Spitz 2005) ; zaza (Robinson and Unruh 2008) dalàna, ara-tsaina (Robinson and Unruh 2008) ; ary ireo marary fitsaboana tranainy sy maratra (Arras 2008) .
Nanodidina ny taona 1990 anefa, dia nanomboka niaro ny fiarovana ny fahafahan'ny (Mastroianni and Kahn 2001) . Ohatra, ireo mpikatroka dia nanamafy fa ny ankizy, ny vehivavy, ary ny foko vitsy an'isa dia nila nampidirina amina fisedrana ara-pitsaboana, mba hahafahan'ireo vondrona ireo mandray soa avy amin'ny fahalalana azon'ireo fitsapana ireo (Epstein 2009) .
Ankoatra ny fanontaniana momba ny fiarovana sy ny fidirana, ny fitsipiky ny Fitsarana dia matetika mandika ny fanontaniana momba ny fanonerana ho an'ny mpandray anjara - fanontaniana izay iharan'ny adihevitra mafana amin'ny etika ara-pahasalamana (Dickert and Grady 2008) .
Ny fampiharana ny fitsipiky ny fitsarana ho an'ireo ohatra telo ireo dia manome fomba iray hafa hijerena azy ireo. Tsy nisy ny fanadihadiana no nandraisan'ny mpandray anjara ara-bola. Encore dia mametraka ny fanontaniana faran'izay sarotra momba ny fitsipiky ny Fitsarana. Raha toa ny fitsipiky ny tombom-barotra ka manoro hevitra ny manavaka ireo mpandray anjara avy amin'ireo firenena manana governemanta mandainga, ny fitsipiky ny Fitsarana dia afaka miady hevitra amin'ny famelana ireo olona ireo handray anjara-ary mahazo tombony avy amin'ny sanda azo avy amin'ny sivana amin'ny aterineto. Ny tranga amin'ny Tastes, Ties, Time ihany koa dia mametraka fanontaniana satria ny vondrona mpianatra iray no nitarika ny enta-mavesatry ny fikarohana ary ny tombotsoan'ny fiarahamonina iray manontolo. Farany, ao anatin'ny fifamatorana ara-pihetseham-po, ireo mpandray anjara izay nitondra ny enta-mavesatry ny fikarohana dia fakan-tsarimihetsika iray avy amin'ny vahoaka izay mety handray soa avy amin'ny vokatra (dia ny mpampiasa Facebook). Amin'izany heviny izany dia nifanaraka tsara tamin'ny foto-kevitry ny Fitsarana ny fanehoana ny fifandraisana ara-pihetseham-po.